के बढ्ला त मलिकाको फिल्ममा पनि क्रेज ? « Mazzako Online
के बढ्ला त मलिकाको फिल्ममा पनि क्रेज ?
भिडियोमा क्रेज हुँदैमा फिल्ममा पनि हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय कलाकार त भिडियोबाट उदाएर भिडियोमै क्रेज सकाउने पनि छन् । यसैले भिडियोमा चल्ने वित्तिकै कलाकारको क्रेज फिल्ममा पनि उस्तै हुन्छ भनेर सोच्नु मुर्खता हुन्छ । अभिनेत्री मलिका महत्तको अहिले यस्तै छ । मलिका महतले काम गरेको फिल्म यात्रा हो ।
यो फिल्म रिलिज भएपनि उनको चर्चा अपेक्षित भएको थिएन । उनले दोश्रो फिल्म पानी फोटोमा काम गरेकी छिन् । यो फिल्म रिलिज भएको छैन । मलिकाले अभिनय गरेको फुलबुट्टे सारी र टाढा भएपनि बोलको गीतले युटुबमा हंगामा नै मच्चाइरहेको छ । यो गीतले नयाँ नयाँ रेकर्ड पनि राख्यो । यस्तो अवस्था आएको छ कि, मलिकाले बनाएको रेकर्ड अरु कसैले ब्रेक गर्छ या गर्दैन भन्ने पनि छ ।
तर, भिडियोमा मलिकाको यस्तो क्रेज देखिदा, के यो क्रेज फिल्ममा पनि देखिएला त भन्ने छ । मलिकालाई फिल्मको अफर गएको खासै सुनिएको छैन । यसैले पनि उनलाई लिएर फिल्म बनाउन निर्माता उत्साहित होलान् कि नहोलान् भन्ने देखिएको छ ।
के नेपाली फिल्म लयमा फर्किन १० बर्ष लाग्ला ?
ह्याप्पी बर्थ डे जसिता गुरुङ
वरिष्ठ निर्देशक चेतन कार्कीको कोरोनाका कारण निधन
पुष्प खड्काको सहयोग
विर विक्रम २ हिन्दी भाषामा रिलिज हुने